स्वास्थ्य टिप्स: कलेजो सफा पार्ने खानेकुरा के के हुन् ? ।bishwaghatana
स्वास्थ्य टिप्स: कलेजो सफा पार्ने खानेकुरा के के हुन् ?
कलेजो सफा पार्ने खानेकुरा के के हुन् ?
हामीले सेवन गर्ने रक्सीले शरीरको कलेजो, मुटु, मस्तिष्क, आन्द्रा, खाना नली आदिलाई असर गर्छ । मानिसको कलेजो, शरीरको दाहिनेतिर फोक्सोको तल हुन्छ । स्वस्थ मानिसमा यसको वजन १.५ केजी हुन्छ । कलेजो अति नरम र शरीरको महत्त्वपूर्ण अंगमध्ये एक हो । वैज्ञानिकहरूका अनुसार यसले मानिसलाई आवश्यक पर्ने ५००० भन्दा बढी काम गर्छ ।
हामीले सेवन गरेको रक्सी ‘एल्डिहाइड’ भन्ने रसायनमा परिवर्तन हुन्छ । यसले सुरुमा कलेजोमा संक्रमण गर्छ र कलेजो सुन्निन थाल्छ ।
रक्सी सेवन निरन्तर भएमा विस्तारै कलेजो कडा हुँदै जान्छ र अन्त्यमा कलेजो पुरै बिग्रिने अवस्था आउँछ । त्यसैलाई हामी ‘सिरोसिस’ भन्छौं । मानिसको अंगमध्ये मस्तिष्क फेल, हृदयाघात, मिर्गाैला फेल हुने अवस्थाभन्दा पनि कलेजो फेल भयो भने बिरामी मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
गर वा मर’को अवस्थामा राजस्थान रोयल,आज हारे प्लेऑफको सम्भावना समाप्त